သင်ကြည့်ရှုရန်လိုအပ်သည့်ဂီတဗီဒီယိုလေးခု | စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
de la ဂီတဗီဒီယိုအသစ်များ၏ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မတူညီကမ်းလှမ်းမှုဘယ်ကြည့်သူတွေမဖြစ်မနေကြည့်ရမလဲ။ သင်မေးသောသူပေါ် မူတည်၍ အဖြေမှာကွဲပြားသည်။ ဒါငါတို့ပဲ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏ဗေဒဆိုင်ရာမကြာသေးမီကဗီဒီယိုလေးခုကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဤလေးမျိုးလည်းဖြစ်မည်မှာသေချာသည် ယခုအချိန်ထိယခုနှစ်အကောင်းဆုံးနှစ်များထဲမှသီချင်းများနှင့်ကိုက်ညီပါ.
1 Lorde - အစိမ်းရောင်အလင်း
2 The Weeknd - ငါခံစားရတယ် (ft ။ Daft Punk)
3 ကြက်သွေး5- အေး (ft ။ အနာဂတ်)
4 ဘရူနိုမားစ် - ဒါငါကြိုက်တာပဲ
Lorde - အစိမ်းရောင်အလင်း
၎င်းတို့၌သူတို့၏အသံထွက်သို့မဟုတ်သီချင်းစာသားများမပါရှိပေ။ သို့သော်သူတို့၏ပထမဆုံးပွဲထုတ်အယ်လ်ဘမ်ဖြစ်သော Pure Heroine တွင်မူ Green Light ကိုအံ့သြစရာမကောင်းအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ 'Melodrama' အယ်လ်ဘမ်၏ပထမ ဦး ဆုံးကြိုတင်, ကအကြောင်းပါ အလွန်မူရင်းနှင့်စူပါ danceable သီချင်း အဘယ်သူ၏ဗွီဒီယိုကို Sky Ferreira မှနှစ်သက်သောအခြားအဆိုတော်တစ်ယောက်၏ပုံမှန်ပူးပေါင်းသူ Grant Singer မှရိုက်ကူးထားသည်။
The Weeknd - ငါခံစားရတယ် (ft ။ Daft Punk)
စိန့်လော်ရန်စစ်တပ်ဂျာကင်အင်္ကျီဖြင့်ပတ်ထားသောကနေဒါအနုပညာရှင်သည်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရိုက်ကူးပေးသည် Daft Punk နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော Kiko Mizuhara တို့နှင့်လိုက်ပါခဲ့သည်။ အမြင်အာရုံချွတ်ယွင်းချက် (လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ မှ ၃၀ တိုင်ပြproblemနာမရှိဘဲရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့) သည်၎င်း၏လှပသောရုပ်ပုံများသည်သင့်အားစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ထားသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကမှာနေဆဲဖြစ်သည်။
ကြက်သွေး5- အေး (ft ။ အနာဂတ်)
ကောင်းသောလူဟောင်း Adam Levine သည်သူ၏ဇနီး Victoria's Secret မော်ဒယ် Behati Prinsloo အတွက်နို့အနည်းငယ်သာဝယ်လိုခဲ့သည်။ သို့သော်သူသည် Future ၏ပါတီပွဲ၌အရောင်ပြန်လှန်လိုက်သည်။ အမှားကတော့သူ့ဖန်ခွက်ထဲထည့်လိုက်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့အစက်လေးတွေနဲ့ပါ။ ဘယ်တော့မှအာရုံစူးစိုက်မှုမရှိထဲကသည်သင်၏စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာကြည့်ပါ ပွင့်လင်းသောရှပ်အင်္ကျီနှင့် biker ဂျာကင်အင်္ကျီအောက်ရှိ Wu-Tang Clan တီရှပ်.
ဘရူနိုမားစ် - ဒါငါကြိုက်တာပဲ
၎င်းသည်သူ၏အထင်ရှားဆုံးသောဗွီဒီယိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်၊ သို့သော်သီချင်းသည်သူ၏စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်သူ၏အသွင်အပြင်သည်မဖြုန်းတီးပါ။ ဘရူနိုသည်အပန်းဖြေစခန်းအနည်းငယ်သာရှိသည် ဂျီ ometric မေတြီပုံနှိပ်ပိုးထည်၊ ချွေးအင်္ကျီများ၊ အဖြူ Nike Cortez စနီကာနှင့်စတုရန်းနေကာမျက်မှန်များရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » အချိန်အား » သင်မလွတ်နိုင်သောဂီတဗီဒီယိုအသစ်များ